Iipads zedayimane yeHTC
Iiphedi zedayimane zeLavina
Iipads zedayimani zeHusqvarna
Ukusungulwa kweemveliso ezintsha nge-24 kaJuni
Molweni, bonke abathengi abadala beBontai kunye nabahlobo abatsha, kuyakuvuyela ukwazisa ukuba siza kuba nemveliso entsha yokuqalisa umboniso kwiqonga laseAlibaba ngexesha laseBeijing ngo-11: 00, ngoJulayi 24, lo ngumboniso wethu wokuqala ophilayo ngo-2021. Iimveliso ezintsha kubandakanya ikomityi yokusila kweevili, iipoyinti zentlaka, amanyathelo ama-3 po ...
I-diamond ye-diamond yokugaya ikomityi yekhonkrithi kunye ne-terrazzo
ngomphathi ku 21-06-08
I-Bontai ye-turbo yedayimane yokugaya iivili zeekomityi zenzelwe ngokukodwa iidayimani eziphezulu zoshishino kwixesha lokuphila kunye nokugqitywa komhlaba. Eli vili lendebe yedayimani lihlala ixesha elide lisakhelwe ukugaya ikhonkrithi ephilisiweyo, isitena esinzima / ibhloko kunye negranite enzima. Zingasetyenziselwa ...
Inkqubo yokugaya izihlangu zeBontai Diamond
Xa abathengi abaninzi abatsha beqala ukuthenga izihlangu zedayimani ezivela eBontai, baya kudibana neengxaki ezininzi, ngakumbi abathengi abathile abaneenkcukacha ezizodwa okanye iimfuno. Xa u-odola iimveliso kunye nenkampani, ixesha lonxibelelwano liya kuba lide kakhulu kwaye uku-odolwa kwemveliso ...
Iipads zokucoca i-Hybrid-inguqu egqibeleleyo kwiipads
Kwixesha elidlulileyo, uninzi lwabantu lupolishe umgangatho nge-resin pads ukusuka kuma-50 # -3000 # ngqo emva kwamanyathelo okusila ngedayimani yesinyithi 30 # -60 # -120 #, Oku kuthatha ixesha elininzi kwaye kwandisa iindleko zabasebenzi ukususa imikrwelo ishiywe yipads yentsimbi yesinyithi, ngamanye amaxesha kufuneka upolishe amatyeli aliqela t ...
I-Bontai 3 inyathelo lokucoca ipads longa ixesha lakho kunye neendleko zokucoca amatye
Kwixesha elidlulileyo, njengoko sisazi ukuba ukuze ufumane ukuqaqamba kokwenyani, amanyathelo asixhenxe eepilingi zokucoca idayimani ayinakuba ngumceli mngeni. Emva koko saqala ukubona amanyathelo ama-5. Ngamanye amaxesha babesebenza kwizixhobo ezilula. Kodwa iigranite ezimnyama, siya kufumana iziphumo ezilungileyo kodwa kusafuneka sisebenzise iphedi. Ke xa ...
Izinto eziluncedo lokusila eziphathekayo
Ukusila okuphathekayo yindlela yokugcina ipavumente ngokususa izitenxo zomhlaba kunye nokungafezeki. Oku ngamanye amaxesha kubandakanya ukulinganisa ikhonkrithi ukwenza umphezulu womelele ngakumbi, okanye ukusetyenziswa kwesinyithi sekhonkrithi kunye neepayipi zokugaya zedayimane ukugudisa umphezulu ombi. Ekhoneni, abantu nathi ...
Iindidi ezahlukileyo zokuguba komgangatho wekhonkrithi
Ukukhethwa kwe-grinder yekhonkrithi kuxhomekeke kumsebenzi oza kwenziwa kunye nohlobo lwezinto eziza kususwa. Ulwahlulo olukhulu lwezinto zokugaya zekhonkrithi zezi: Ukusingathwa kweKhonkrithi yokuHamba kweKhonkrithi Ukuhamba ngasemva kweeGrinders 1. Isandla esenziwe ngesandla seKhonkrithi Isigcini sekhonkrithi esetyenziswa ngesandla sisetyenziselwa ukugaya ikhonkrithi ...
Ipolishi emanzi & ipolishi owomileyo umgangatho eziphathekayo
Ikhonkrithi inokukhazimla kusetyenziswa zombini iindlela ezimanzi okanye ezomileyo, kwaye iikontraki ngokubanzi zisebenzisa indibaniselwano yeendlela zombini ngaphambili. Ukuguba okumanzi kubandakanya ukusebenzisa amanzi, nto leyo eyenza ukuba idayimani epholileyo isuse idayimani kwaye isuse uthuli ekusileleni. Ngokusebenza njengesithambisi, amanzi anokuwandisa ...
Khetha izihlangu ezifanelekileyo zokusila idayimani kumgangatho wakho
Izihlangu zeBontai zokuguba idayimani ziphakathi kweedayimani ezintle kwimarike, singenise kumazwe angaphezu kwe-100 emhlabeni iminyaka emininzi, kwaye sele sifumene uninzi lwabathengi abalungileyo, ukuvunywa kunye nokudumisa kwiimveliso zethu kunye nenkonzo yethu ebalaseleyo. Namhlanje siza kuthetha ...
Namhlanje sivavanye ikhonkrithi kuvavanyo lokuboniswa bukhoma, ubukhulu becala sithelekisa ukukhanya kwe-3, ishumi elinambini icandelo lokucoca iphedi kunye ne-3-torx pad polishing. Eli licandelo le-3 ukuya kwelishumi elinambini lokucoca iphedi, ubukhulu be-12mm, ilungele ikhonkrithi eyomileyo kunye nomgangatho we-terrazzo. Imigangatho 50 # ...
Intsimbi yokubopha ipeyinti yentsimbi ye-resin yenye yeemveliso zethu eziphambili, siye sasikolu shishino ngaphezulu kweminyaka eli-10. Intsimbi yokubopha ipeyinti yenziwa ngokuxuba kunye nokutofa umgubo wedayimani, i-resin, kunye neefilitha emva koko zicinezelwe ngokucinezelwa kumatshini wokushicilela, emva koko zipholise kwaye zidilize ...